Casharro: Shaqo-socod leh Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Antonio L. Carter | | General, Photoshop, Tababarada
Xirfadlaha ah imagenHaddii aad tahay naqshadeeye, sawir qaade ama sawir qaade, waxaad dooneysaa inaad safka hore ka gasho xirfaddaada, waa inaad taqaanaa sida ugu habboon ee loo maareeyo nidaamyada kombiyuutarka ee kala duwan ee ay teknolojiyaddu bixiso, iyo sidoo kale software taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad si raaxo leh u shaqeysid, si aad ula tartanto shaqadaada.
Tiknoolajiyadda maanta waxay ka dhigtay aqoonta mid ka mid ah astaamaha aad ku magacaabi jirtay sadarka hore waxay bedeshay astaamaha xirfaddooda, taasoo ka dhigtay inay bartaan xirfado cusub si ay awood ugu yeeshaan inay horumariyaan shaqadooda. Sawir qaadaha maanta, aad ayey uga muhiimsantahay in la ogaado sida loo maareeyo tafatirka sawirada iyo barnaamijka abaabulka halkii aad ka ogaan laheyd sida loo isticmaalo qolka mugdiga ah. Taasi waa sababta aan maanta kuu keenayo Cashar barasho: Workflow leh Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop (Qaybta I) .
Maanta, a kamarad dijital ah waxay toogan kartaa boqolaal sawir, halkaasoo mid ka hor intaan la aadin lagu rakibo kun giraangiraha, maanta waa ku filan tahay inaad qaadatid labo kaar oo 32gb ah, oo qaadaya kalabar booska oo laba jeer waxtar leh. Ogaanshaha sida loo isticmaalo filimku waa waqtigeenna anachronism, maadaama ku dhowaad kamarad lahayn suurtogalnimada galinta filim. Qoraal hore waxaan ku aragnay Casharbarka: Si Deg Deg Ah U Xulo Muuqaaleedka Sawirka, Halka aan ku barayo farsamo aad si dhaqso ah u doorato qorista qoraalka.
Gelitaankani waa bilowga casharro taxane ah oo aan ku bari doono inaad yeelato nashaadaad macquul ah, adoo adeegsanaya laba ka mid ah barnaamijyada Suite ee Adobe sida ay yihiin Bridge (qabanqaabiye sawir aad u xoog badan) iyo Photoshop (barnaamijka tafatirka sawirka par heer sare) si loo helo natiijada ugu fiican waqtiga ugu yar, marka la sameynayo daaweyn ah imagen koox sawiro ah.
Xaaladdan oo kale waxaan u isticmaali doonaa fadhi sawir ah oo aan u sameeyay macmiil ku saabsan eydeeda, oo ah Shepherd Jarmal ah oo la magacaabay Lenny taas oo noqotay mid ku dayasho mudan. Waxaan ka bilaabeynaa qormooyinka in kalfadhigii lagu soo dejiyay galka laftiisa isla markaana uu leeyahay magaca Lenny. Si tan loo socodsiiyo tutorial Waxaad u baahan doontaa oo kaliya inaad haysatid Adobe CS6 Suite oo la rakibay, in kastoo xulashooyinka badankood laga helo dhammaan noocyadii hore. Waxaan kuu daayay gal ay ku jiraan sawirada Lenny a link Dhamaadka tutorial.
Ujeeddada tan tutorial, waa in sifiican loogu soo bandhigaa sawirka Lenny, oo ay ku jiraan sawirro la magacaabay, wax laga beddelay oo dib loo hagaajiyay, iyo in la maalgeliyo waqtiga ugu yar ee shirkaddan si loo kasbado lacag badan saacaddii shaqada. Waan hubaa inaad ila jiri doontid taasi waa ujeedo.
1 Dalbo wax walba ka sareeya
2 Si fudud ugu magacaw
3 Soo Xul oo Toos
Dalbo wax walba ka sareeya
Aynu ku bilowno kala soocida galka Lenny, maaddaama ay tahay inaan eegno ka hor intaanan go'aan ka gaarin daaweynta aan ku fulin doonno sawirrada koox ahaan (ma ahan shaqsi ahaan, tan iyo haddii aan go'aansanno inaan siinno sawirro kale sawir kasta, waa inaan fulinno nooc kale oo farsamo ah socodka shaqada marka ay timaado hagaajinta xiriirka ka dhexeeya tayada shaqada, waqtiga la geliyay iyo lacagta la kasbaday. Si aad u daawato sawirada waan fureynaa Adobe Bridge, Meel aan u adeegsan doonno inaan ku eegno, ku dooranno, toosinno (haddii loo baahdo), metadata iyo calaamadeynno shaqadeena
Si fudud ugu magacaw
Ku shaqeynta magaca ay kamaraddu siiso sawirka, marka laga reebo xoogaa murugo, ma aha mid aad wax ku ool ah, maadaama magacyada isku murgisan ay naga sii adkaan doonto inaan dooranno. Si aad ugu magacawdo dhamaan sawirada jiida, dhamaan sawirada waa la xushay (Ctrl + alt) ka dibna waxaan aadeynaa xulashada Tools oo waxaan dooranay ikhtiyaarka Magaca Dufcaddii Badal.
Sanduuqa wadahadalka ayaa furmi doona, kaas oo yeelan doona dhowr ikhtiyaar, si loogu magacaabo loona tiro lambarrada sawirrada xulashooyin kala duwan, oo ay ku jiraan taariikhda, magaca, xitaa milliseconds. Waxaan badbaadin karnaa xulashada magaca ee aan dooneyno inaan ku fulin karno shaqooyinka kale, ama xitaa dhowr ku keydin karno. Waxaan dooran doonaa ikhtiyaar na siinaya magaca Lenny lambarka taxanaha ah. Markaan helno dhamaan sawirada magacyadooda la badalay, waxaan bilaabaynaa inaan doorano oo toosino kuwa qalloocan, ha ahaato ama ha qiimeyno kuwa aan ugu jecel nahay nidaamka xiddigta ama inaan u kala saarno kooxo iyadoo ku xiran muhiimadooda ama haddii wax ka bedelid lagama maarmaan.
Soo Xul oo Toos
Waxaan dooran doonnaa sawirada aan aadka ujeclaanay waxaanan siineynaa qiimeyn xidigaha ah. Tani waxay naga caawin doontaa inaan markaa awood u yeelanno inaan si dhakhso leh ugu helno iyaga oo adeegsanaya ikhtiyaarka barnaamijku u awoodo. Waxaan sidoo kale toosin doonnaa iyaga si aanan ugu dhex sameyn Photoshop, maadaama ku dhaqaaqida ficilkaas barnaamijka tafatirka ay waqti lumineyso isla markaana uusan geli doonin raaxada a socodka shaqada macquul ah.
Adobe Bridge Waxay na siineysaa suurtagalnimada in lagu calaamadeeyo sawirrada iyadoo la adeegsanayo nidaamka dhibcaha iyo nidaamka calaamadeynta midabka, kuwaas oo aad waxtar u leh si loo kala saaro sawirrada kala duwan ee isla kalfadhiga, iyo adeegyada kale ee badan. Waan sii socon doonnaa ka dib markaan dooranno kuwa u muuqda kuwo wanaagsan, calaamadeynta iyo toosinta kuwa u baahan, si aan ugu kooxeyno kooxo iyadoo loo eegayo baahida koox kasta oo sawir ah. Ka dib markaad isticmaasho Bridge Waxaan ku kala sooci doonnaa fayl.
Iyadoo hawshan hore loo qabtay ayaan u gudbi doonnaa Adobe Photoshop casharka xiga.
Macluumaad dheeraad ah - Casharbarka: Si Deg Deg Ah U Xulo Muuqaaleedka Sawirka
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Cashar barasho: Workflow leh Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop (Qaybta I)